Kedu ihe dị iche n'etiti AI na Mmụta Ngwa? | Martech Zone
Enwere ọtụtụ echiche a na-eji ugbu a - ụkpụrụ ude, nkwụsị, mmụta miri emi, ngwa igwe, wdg. Ihe ndị a niile na-abịa n’ezie echiche izugbe nke ọgụgụ isi mana a na-agbanwe okwu ahụ mgbe ụfọdụ na-ezighị ezi. Otu nke pụtara ìhè bụ na ndị mmadụ na-ejikọ ọgụgụ isi na mmụta igwe. Nkuzi igwe bu udi nke AI, mana AI ekwesighi itinye akwukwo na igwe.
Amamịghe echiche (AI) na mmụta igwe (ML) na-agbanwe etu otu ndị ọrụ ngwaahịa si etolite mmepe na atụmatụ azụmaahịa. Ulo oru nke AI na Igwe Igwe na-aga n'ihu na-abawanye nke ukwuu kwa afọ.
Gịnị bụ ọgụgụ isi?
AI bu ikike nke komputa ime ihe dika ihe omumu na ime mkpebi n'ime mmadu, dika site na usoro ndi okacha amara, ihe omume nke CAD ma obu CAM, ma obu ihe omume nke echiche na nnabata nke onodu na usoro ihe omuma kọmputa.
Gịnị bụ ọmụmụ igwe?
Nkuzi igwe bu ngalaba amamịghe nke komputa na emeputa iwu na adabere ma obu dabere na ihe omimi nke etinyeworo n’ime ya.
Igwe ihe omuma bu usoro nke esi emeputa data ma nweta ihe omuma site na ya site na iji algorithms na ihe nlere. Usoro bụ:
Data bụ abanye ma kewaa n'ime data ọzụzụ, data nkwado, na nnwale data.
Ihe nlere bu wuru tinye n'ọrụ data ọzụzụ.
Ihe nlereanya bụ mezuru megide data nkwado.
Ihe nlereanya bụ na-ege ntị iji melite ziri ezi nke algọridim tinye data ọzọ ma ọ bụ gbanwee nhazi.
Trainedkpụrụ a zụrụ azụ bụ arụ ọrụ iji mee amụma banyere usoro data ọhụrụ.
Ihe nlere na-aga n'ihu nwalere, kwado ya, ma gee ya ntị.
N'ime ahia, mmụta igwe na-enyere aka ịkọ ma bulie mbọ ndị ahịa na azụmaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịbụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ puku ndị nnọchi anya yana akara aka nwere atụmanya. Enwere ike ibubata data ahụ, kewaa ya na algọridim nke na-egosi na atụmanya ga-azụ ahịa. Mgbe ahụ enwere ike ịnwale algorithm megide data nnwale gị dị ugbu a iji kwado ya ziri ezi. N'ikpeazụ, ozugbo emechara ya, enwere ike itinye ya iji nyere ndị otu ahịa gị aka ibute ụzọ ha dabere na ọ nwere ike imechi.
Ugbu a jiri usoro algorithm a nwalere ma bụrụkwa ebe, ịre ahịa nwere ike itinye usoro ndị ọzọ iji hụ mmetụta ha na algorithm. Enwere ike itinye ụdị ọnụọgụ ederede ma ọ bụ mgbanwe algorithm nke omenala iji nwalee ọtụtụ usoro iwu megide ụdị ahụ. Ma, n'ezie, enwere ike ịchọta data ọhụrụ nke na-egosi na amụma ndị ahụ ziri ezi.
N'aka ozo, dika Lionbridge gosiri na infographic a - AI vs. Ngwa igwe: Kedu ihe dị iche?, ndị na-ere ahịa na-enwe ike ịme mkpebi, nweta arụmọrụ, melite nsonaazụ, nyefee n'oge kwesịrị ekwesị, yana ahụmịhe ndị ahịa zuru oke.
Budata Wzọ 5 AI ga-agbanwe usoro gị
Tags: aiAmamịghe echicheinfographicọdụmngwa igwe
Olee otú Nchebe Weebụ si emetụta SEO